QORASHAHA DHABTA EE KA DANBEEYA DAMACA CANFARTA – Xeernews24
QORASHAHA DHABTA EE KA DANBEEYA DAMACA CANFARTA
8. April 2021 /in WARAR/NEWS /von admin
Galbeedka Sitti waxaa ka socda dagaal iyo dirir ma dhihi karo ee waxaan dhahayaa waa gumaad iyo xasuuq qorshaysan .
Shacabka Galbeedka Sitti dagan waxa lagu gumaadayo ma aha mid ku kooban dagaalo iyo is qabqabsi dhex mara ood wadaagta ee waa qorshe dhaafsan oo leh Ujeedooyinka fog .
WAA MAXAY UJEEDOOYINKA FOG EE LAGA LEEYAHAY GUMAADKAN?
Waxaa qorshaysan in gobolada canfartu dagto dalka Djibouti mustaqbal ahaan go’aan gooni isu taagaan kaabayaashii dhaqaale ee u asmaxayay arintaana waa loo dhamaystiray.
Markuu hawaawigaayi rumoobo waxaa u samaysmaya Cafar waa siday is leeyihiine dawlad ballaadhan oo ka kooban gobolada koonfureed iyo qayb ahaan Dikhil oo uu ay marto laamida wayn ee xidhiidhsan ilaa dawlad degaanka Canfarta .
Aragtidooda waxaa Qorshahaa carqalad hor taagan ku ah shacabka dagan Galbeedka Sitti aaga uu ku socdo gumaadka joogtada ah ee aanan damayn .
Markaa Dagaalka ujeedooyinkiisa fog ee cadawga huwanta ihi ka leeyahay ayaa ah in Shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan aagaa laga barakiciyo dhulkooda oo loo raro dhanka bari ee gobolka Sitti
Qorshahaasii waa mid raagay hawlgalada lagu hirgalinayana waa mid si joogta ah u socda oo aan marnaba laga daalayn .
YAA WADA QORSHAHAA MAXAYNA UGA DANLEEYIHIIN ?
1- TPLF TIGREEGA : Wuxuu xad la leeyahay dawlad degaanka Canfarta wuxuuna si joogta ah ugu soo siqaa degaanka Canfarta oo is haadana ka qaatay dhul aad u ballaadhan oo masana ah.
Tigreegu wuxuu qorshaystay mustaqbalka Canfarta siduu u riixayo inuu kala wareego dhulkooga iyagana uu hubeeyo kuna dhaho dhulkan soomaalidu dagantahay inigaa lehe soo rita .
2- DJIBOUTI : dana siyaasadeed oy leeyihiin masuulin soomaali ah oo aan marnaba danaynayn aayaaha ubadkooga iyo qoomiyadoodiyo jiritaankooga masiiriga ah danahaa siyaasadeed waxaa ku lifaaqan dana qawmi ah oo ay leeyihiin masuuliinta ugu sarsareeya canfarta Djibouti .
3- CANFAR : Labadaa kore ayaa jihaysa oo maalgashata oo ku guuura iyaguna waxay is moodayaaan inay lafahooga iyo aayahooga u sacyinayaaan .
Qorshahaa si uu hir galo dhinac walba wuxuu adeegsadaa basaasiin labadublayaal ah oo la jasad iyo jinsiyad ah umadan la gumaadayo wayna ku dhex jiraan dadka iyagaana ka hagardaamo badan cadaawaha .
Akhriste intaa markaad ila garatay faataxada u mar una ducee shacabka iyo ciidamada Soomaaliyeed ee ku shihiiday gumaadkaa xaqdarrada ah sidoo kale ka qayb qaado GURMADKA IYO GARGAARKA SOCDA EE LOOGU HIILINAYO .
Allaha u naxariisto shuhadada qabriga Allaha u nuuro maatiday ka baxeena samir iyo iimaan allaha ka siiyo agoontadana Allaha kobciyo dhaawacana Allaha noo dhayo guushana Allaha na siiyo bisha barakaysan ee Ramadaan horteed.
W.Q / Zakaria Saad Ahmed
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2020/10/Garba-ciise.jpg 602 1080 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2021-04-08 00:16:592021-04-08 00:16:59QORASHAHA DHABTA EE KA DANBEEYA DAMACA CANFARTA
SAWIRRO: Shacabka Soomaali-State oo dhiig shub iyo gurmad bilaabay. Odhaahda Maanta Jinsi waa ma Guuraan!